Puntland oo sheegtay inay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka kala xaajoodeen xannibaad ka qaadidii VOA. – Radio Daljir
Puntland oo sheegtay inay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka kala xaajoodeen xannibaad ka qaadidii VOA.
Oktoobar 9, 2009 12:00 b 0
Bossaso Oct 09 – Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna siihayaha xilka wasiirka ee Puntland C/shakuur Mire Aadan oo Casar-liiqii galabta shir xasaafadeed ku qabtay xarunta Madaxtooyada ee magaalada Bossaso ayaa sheegey in xannibaad ka qaadidda laanta afsomaliga ee VOA ay ku timid wadahadal dhexmaray Madaxda Puntland, Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo Madaxda idaacaddaasi.
Wasiirka ayaa tibaaxay in madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole iyo safiirka Mareykanka ee Nayroobi Mr, Mishel ay khadka telefoonka arrintaasi uga wadahadleen lagu guuleystay in la xalliyo khilaafkii, laakiin waxaa uu diiday inuu qeexo waxa lagu heshiiyey.
Md, Cabdi Shakuur ayaa sheegey in laga bilaabo maanta oo ah 9-ka Oct ay idaacadaha local-ka ah baahin karaan idaacadda VOA wariyeyaasheeduna ay u fasaxan yihiin inay gutaan shaqadooda inkastoo qaar ka mid wariyeyaashaasi loo digay.
C/shakuur ayaa intaasi ku daray in ninkii sheegtay inuu yahay wakiilka ururka Ahlu-sunna ee deegaanada Puntland uu xiran yahay dhawaanna maxkamad la soo taagi doono.
Idaacadda VOA ayaa ah idaacad si weyn looga dhageysto deegaanada Puntland waxaana jiray dad aad u badan oo soo booqanayey xafiisyada idaacadda Daljir oo ah idaacadda ugu weyn deeganada Puntland oo si rasmi ah u baahisa laanta Afsomaliga ee VOA, kuwaasi doonaya inay ogaadaan sababta hakinta iyo xilliga la soo celinayo.
Waxaa lagu arkayey inta badan koobaha ay dadku isugu yimaadaan oo la dhigay rikoodho waaweyn oo laga dhageysanayo idaacadda VOA xilliyada ay soo gasho iyadoo la adeegsanayo mawjadaha gaagaaban inkastoo ay taas lafteeda dad dhib kale kulmeen ay dadku illaaween isticmaalka mawjadahaas oo mar hore ugu dambeysay.
Axmed Sheekh Maxamed Tallman
Doontii Bossaso ku gubatay & madaxda Puntland oo ka hadlay.
Puntland oo dawladda Ethiopia ku eedaysay weerarkii Galkacyo ka dhacay.